युवावस्थामै उच्च रक्तचाप | Nagarik News - Nepal Republic Media
पहिले निश्चित उमेर पुगेपछि मात्र देखिने रगत तथा मुटुसम्बन्धी रोग पछिल्लो समय वृद्ध, युवा सबैमा बढ्दै गएको छ। रक्तचाप बढी र कम किन हुन्छ ? यसले कुन कुन अंगमा कस्तो असर पु¥याउँछ ? प्रस्तुत छ मनमोहन कार्डियो भास्कुलर, थोरासिक एन्ड ट्रान्सपलान्ट सेन्टरका वरिष्ट मुटुरोग विशेषज्ञ तथा प्राध्यापक डा. रत्नमणि गजुरेलसँग नागरिक दैनिककी पवित्रा सुनारले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप :
२० वर्ष भयो। तर मुटुरोग विशेषज्ञकै रूपमा चाहिँ १० वर्ष भयो। अहिले कार्डियोलोजीको इन्टरभेन्सन कार्डियोलोजी (मुटुरोगको नचिरिकन भिडियोमार्फत मुटुको नसा तथा भल्व खोल्ने प्रक्रिया) को काम गर्छु। यसका लागि मैले इटली, सिंगापुर र अमेरिकामा फेलोसिप गरेको थिएँ।
मुटुले पम्प गरेको रगत नलीबाट मानव शरीरका विभिन्न भागमा पुग्छ। मुटुले पम्प गर्दा एक प्रकारको चाप निस्किन्छ। जुन मुटुको नसामा बग्दा नसामा दिने पे्रसर नै रक्तचाप हो। यो चाप विशेष प्रकारको यन्त्रबाट नापिन्छ।
कतिपय बिरामी ‘एक पटक उच्च रक्तचाप नापौं न’ भनेर आउँछन् भने कतिपय आफूमा रक्तचाप भएको शंकाले पनि आइपुग्छन्। उच्च रक्तचाप साइलेन्ट किलर हो। जसले रक्तचाप नभए पनि भित्रभित्र असर पु¥याउँछ। कतिपय त लक्षण नभए पनि भित्री अंगमा क्षति पुगिसकेको अवस्थामा आइपुग्छन्।
हाम्रो देशमा उच्च रक्तचापका बिरामी बढ्दो क्रममा छन्।
भइसकेको अवस्थामा आफ्नो जीवनशैली परिवर्तन गर्नुपर्छ। मैले कति व्यायाम गर्छु ? कति तनाव लिन्छु ? भन्ने कुरामा ख्याल गर्नुपर्छ। तौल नियन्त्रण गर्ने, शारीरिक व्यायाम गर्ने, चिल्लो तथा नुन कम भएका खाना खाने गर्नुपर्छ। व्यायामले पाँच मिलिलिटर रक्तचाप घट्छ भने खानपानले अर्को पाँच मिलिलिटर घटाउन सकिन्छ। यसरी घटाउँदै गए रक्तचापको औषधि सेवन नगर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। तर कुनै पनि बिरामीले चिकित्सकको सल्लाहमा औषधि छोड्ने या सेवन गर्ने गर्नुपर्छ। उच्च रक्तचापसँगै अन्य रोग पनि छन् भने औषधि छोड्न मिल्दैन। अर्थात् बिरामीमा अन्य रोगको स्थिति, मधुमेह तथा कोलस्ट्रोलको जोखिम छ भने औषधिको सेवन गर्र्नुपर्छ।
निकै उचित प्रश्न। जति उच्च रक्तचापमा जटिलताको जोखिम हुन्छ, त्यति कम रक्तचापमा हुँदैन। तर यसले जोखिम नहुने भने होइन। यसले पनि उच्च रक्तचापले जस्तै अन्य अंगमा असर पु¥याउँछ।
पौष्टिक खानेकुरा तथा झोल कुरा कम खाएमा, शरीरमा पानी तथा झोलको मात्रा कम भएको अवस्थामा, हर्मोनको रोग र पिटियुटरी ग्लान्डको रोग भएमा पनि रक्तचाप कम हुन्छ। बिरामीमा अन्य रोगको संक्रमण भएपछि सही रूपमा औषधि भएन भने पनि रक्तचाप कम हुन सक्छ।
हाइपो टेन्सन हुँदा बिरामीका मुख्य अंग मस्तिष्क, मिर्गौला र मुटुमा रक्तसञ्चार कम हुनसक्छ। मिर्गौलामा रगत कम भए विकार फाल्न नसकेर मिर्गौला फेल हुन सक्छ। मुटुमा कम भएमा मु्टुले राम्रोसित पम्प गर्न सक्दैन र मस्तिष्कमा रक्तसञ्चार सही रूपमा पुगे भने बिरामीलाई रिँगटा लाग्ने र लड्ने हुन सक्छ। तसर्थ रक्तचाप कम या बढी दुवै भएको राम्रो मानिँदैन। तसर्थ रक्तचाप कम हुनुको कारण खोजेर त्यहीअनुसार उपचार गरे रक्तचाप सन्तुलनमा राख्न सकिन्छ। मस्तिष्कमा रक्तसञ्चार नपुगेमा दिमाग बरबराउने तथा डिस्ओरियन्टेड हुनेजस्ता लक्षण देखिन्छन्।
रक्तचापको कमीले शरीरमा आवश्यक तत्व नपुगेर थकाइ लाग्ने र रिँगटा लाग्न सक्छ।
यो जुनसुकै उमेरमा र कुनै पनि कारणले हुन्छ।
धेरै जसो झाडापखाला लागेको बेला बढी आउँछन्। अन्य थाइराइड तथा अन्य रोग लागेका बिरामी पनि आउँछन्।
कम रक्तचाप भएकाले झोल कुरा बढी खाने र शरीरमा अन्य रोगको खोजी गरेर उपचार गर्नुपर्छ।
प्रकाशित: १४ भाद्र २०७६ ०९:२४ शनिबार